Mohamed Salah Oo Mar Kale SHAKI La Geliyey Inuu Ciyaari Doono Kulanka Caawa iyo In Kale |
Mohamed Salah Oo Mar Kale SHAKI La Geliyey Inuu Ciyaari Doono Kulanka Caawa iyo In Kale
Xiddiga xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah ayaa mari doona baadhitaan caafimaad ka hor ciyaarta caawa ee kulanka labaad ee Koobka Adduunka ee Group A, kaas oo lagu go’aamin doono inuu ciyaari doono iyo in kale.
Masar ayaa waxay la ciyaari doontaa waddanka Ruushka caawa fiidka kulan si toos ah looga baahin doono shabakadda Cadalool.com, taas oo ay ku khasban yihiin inay guul ka gaadhaan si ay tartanka ugu sii jiri karaan maadaama laga badiyey ciyaartii hore ee ay Uruguay iska hor yimaaddeen.
Mohamed Salah ciyaartii hore kaga maqnaa dhaawac garabka bidix ka gaadhay finalkii Champions League ee Real Madrid iyo Liverpool ee dhamaadka bishii May, ayaa waxa mar kale uu muran ku jiraa inuu helayo fursad uu qarankiisa ku caawiyo.
Tababaraha xulka qaranka Masar Hector Cuper ayaa shaaciyey in Mohamed Salah uu mari doono baadhitaan caafimaad maanta si loo ogaado inuu ciyaari karayo iyo in kale, hase yeeshee waxa uu dhinaca kale ku dooday in uu rajaynayo in halyeygani ciyaaro.
Cuper ayaa hadallo iska hor imanaya ka yidhi shir jaraa’id oo uu ku qabtay Ruushka ka hor ciyaarta caawa, waxaana mar la weydiiyey sida uu xaalka Salah yahay uu ku celiyey laba erey oo shaki geliyey, isagoo marka hore sheegay inuu caafimaad qabo, hase yeeshee weedhii xigtay tibaaxay inuu rajaynayo inuu caafimaadi doono, waxaanu yidhi: “Wuu caafimaad qabaa. Waxa aan rajaynayaa inuu caafimaad noqdo. Kulankii hore waxa aanu u malaynaynay inuu caafimaad qbao laakiin tijaabadii u dambaysay ayaanu ku samaynaynaa.”
Difaaca midig ee xulka qaranka Masar ee Ahmed Fathi oo ahaa kabtanka ciyaartii Khamiistii ee xulka Masar ayaa dhaawac fudud oo muruqa ah uu haleelay, lamana oga inuu ciyaari doono kulanka muhiimka ah ee caawa iyo in kale, sidoo kalena laacibka khadka dhexe ee Terek Hamed ayaa Jimcihii la beddelay markii uu dhabarku xanuunay, hase yeeshee xidhiidhka kubadda cagta Masar ayaa shaaciyey inuu caafimaad qabo.
Dhinaca kale, waddanka Ruushka ayaa uu kulankan ka maqnaan doonaa laacibka khadka dhexe ee Alan Dzagoev oo muruq booday ciyaartii furitaanka ee ay ku karbaasheen Saudi Arabia, sidoo kalena difaaca bidix ee Yuri Zhirkov ayaan tababarka la qaadanin kooxda Axaddii sababtoo ah dhibaato uu ka dareemay kuraanta, taas oo markii dambe la xaqiijiyey in aanay saamayn ku yeelan doonin ciyaartiisa.